War Cusub: Dowlada Turkiga oo kordhineyso Taageerada ay siiso Bulshada Soomaaliyeed – Kismaayo24 News Agency
War Cusub: Dowlada Turkiga oo kordhineyso Taageerada ay siiso Bulshada Soomaaliyeed
by admin 8th May 2016 8th May 2016 017
Turkiga dalalka uu deeqda ugu yabooho waxaa kamid ah Soomaaliya – waxaana soo raaca dalka Tuniisiya ee dhaca waqooyiga Afrika, sida ay qortay TIKA.
Haatan, Turkiga –isaga oo doonaya inuu caalamka ku yeesho saameyn, wuxuu rabaa inuu kordhiyo deeqaha uu siiyo dalalka dunida saddexaad. Taasna waxaa Turkiga uga xilsaaran shirkadda TIKA oo ah hey’adda gargaaradda u qaabilsan.
Warbixin ay soo saartay dhawaan ayay TIKA ku sheegtay in Soomaaliya ay ka fulisay mashaariic ku kacay adduun lacageed gaaraya 22.3 malyuun oo Doolar – halkaas oo dalalka Afrika ay yihiin bartilmaameedka koobaad ee deeqaha lasiiyo.
Baddalkii deeq toos ah ay bixin laheyd, TIKA waxay fulisaa mashaariic iyo barnaamijyo loogu tala-galay horumarinta beeraha iyo wax soo saarka.
Sidoo kale, Turkiga ayaa aaminsan islamarkaana adeegsata nidaamka waqf – oo ah sadaqo hor Ilaahay loola baxo – oo waafaqsan diinta Islaamka, sida uu ka sheegay shirweyne ka dhacay Ankara guddoomiyaha TIKA Serder Cam.
Turkiga ayaa usoo gurmaday Soomaaliya sanadkii 2011 markii abaar ba’an ay ku dhufatay qeybo badan oo kamid ah dalka taas oo galaafatay nolosha duunyo iyo dad badan.
Aabo iyo 3 Caruur ah uu dhalay oo Xalay ay Biriq ku dishay Tuulada Xasasley oo ka tirsan Gobolka Mudug
LIVE U DAAWO Diyaaradi ugu horaysay ee so cagadhigatay Garoonka Bosaaso